प्रजु पन्त मंगलबार, वैशाख ३०, २०७७, १७:३७
काठमाडाैं- असम्भव त हैन तर चमत्कारीक आयु हो सय वर्ष। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले मंगलबारबाट त्यो चमत्कारीक आयुसमेत पार गरेर एक सय एक वर्षका भए। उमेरले सय कटेसँगै उनकाे श्रवण शक्ति केही पालतो भएको छ। दृष्य अली धमिलो देख्न थालेका छन्। तर, उनको स्वास्थ्य, जोश, जाँगर अनि स्मरण शक्ति अझै शक्तिशाली छ।
उनको उमेरले जब सय वर्ष टेकेको थियो। उनलाई उनको स्वस्थ जीवनको रहस्य सोधे धेरैले। जतिले सोधे सबैलाई उनको एकै जवाफ थियो चिन्ता हैन, चिन्तन गर्ने। १०१ औँ जन्मदिनमा शुभकामना दिन आइपुगेकाहरुलाई पनि उनले यही मन्त्र सुनाए।
खानपानले पनि आयुमा धेरै असर पार्ने भएकाले धेरैले उनको चमत्कारीक आयुको कारण नियन्त्रित खानपान अनुमान नगर्ने हैनन्। नेवार परिवारका सदस्य जोशीले भने एक सय वर्षपार गरिसक्दा पनि आफ्नो रैथाने खाना छाडेका छैनन्। चिल्लो पिरो उनको मेनुबाट हराएको छैन। बेलुका दुई पेग एैला उनको नियमित सूचीमै छ अझै।
पाइला सार्न उनलाई अझै लौरो चाहिएको छैन। आफैं ठमठम हिड्छन्। उनलाई सय वर्षको यात्राका तीता-मीठा क्षणहरु सम्झन अरु कसैको सहारा चाहिन्न। उनी अहिले पनि लेखनमा उत्तिकै सक्रिय छन्। अनि प्राय सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि देखिइनै रहन्छन्। साधारण जीवन विताउने उच्च चिन्तन गर्ने शैली उनले छाडेका छैनन्।
उनको अन्तिम इच्छा नेपालीले नोबल पुरस्कार पाएको सुन्ने रहेछ। ‘मैले आफूले पाउने भनेको हैन कसैले राम्रो कृति लेखोस्’ जोशीले मंगलबार शुभकामना दिन आउनेहरुलाई भने, ‘नेपाल साहित्यको अन्तराष्ट्रियकरण होस् नोबल पुरस्कार पाएको हेर्न रहर छ।’
सम्पादकीयले बदलेको बाटो
त्रि-चन्द्रबाट बिए पास गरेका जोशी जागिरको खोजीकैक्रममा संस्कृतिसँग जोडिए र उनको पहिचानै त्यसैले बनायो। विसं २००१ मा ‘औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डा’ कार्यालयबाट उनको जागिरे यात्रा सुरु भएको थियो। अड्डाले गाउँघरमा गएर औद्योगिक सर्वेक्षण गर्ने काम गर्थ्यो। गाउँघरमा के कस्तो कोरा सामान पाइन्छन्? त्यहाँको प्राकृतिक अवस्था कस्तो छ? नदिनाला खोला जगंल, पहाड, हिमाल कस्तो छ? सामाजिक र आर्थिक जनजीवन कस्तो छ? यस्तै यस्तै थियो उनको जिम्मेवारी।
त्यतिबेला नेपालको पहिलो एमकम भीमबहादुर पाण्डेले तालिम दिएका थिए। काठमाडौंको डाँडो नकटेका जोशी हातमा नक्सा लिएर घरबाट निस्किए। उनको भागमा लमजुङ र तनहुँ जिल्ला परेको थियो। लोक संस्कृतिमा धनी गण्डक क्षेत्रमा कार्यलयले अर्हाएको काम त जोशीले गरे नै सँगै त्यहाँ सुनेका गीतको भाका पनि टिपे।
५ महिनापछि काठमाडौं फर्कदा जोशीको झोलामा गाउँको नापनक्सा मात्र थिएन। गीतका टिपोट पनि थिए। जुनपछि शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। अहिलेसम्म यस्तो गीत कसैले संकलन नगरेको सत्यमोहनले ल्याए भन्ने फुटनोटसहित।
लोकगीतहरु जहाँ जसले गाए, त्यो ठाउँको वातावरण र परिवेश, पनि थाहा हुने गरी त्यो ठाउँका जाति जनजाति व्यक्ति, मध्ये कसले, किन गाएको, कस्तो अवस्थामा गाएको भनेर चित्रण गरेको भए कस्तो हुन्थ्यो होला भनेर सम्पादकीय टिप्पणी लेखियो।
जोशीले सम्पादकीय टिप्पणी पढेपछि त्यो गीतको महत्त्व थाहा पाए। र गीतको पृष्ठभूमि, परिवेश इतिहास उधिन्न थाले। वनपाखा, चौतारी, मेला, हाटबजारमा गाएका गीत टिप्न थाले। रेडियोले गीत माग्यो। पुस्तक लेखे ‘हाम्रो लोकसंस्कृति’। र यसैले उनलाई पहिलो मदन पुरस्कार दिलायो।
विसं १९७७ बैशाख ३० मा ललितपुरको बखुंबहालमा जन्मिएका उनको यात्रा २०१५ मा पुरातत्व विभागतिर मोडियो। उनी ३८ वर्षका मात्र थिए। पहिलो निर्देशक बने। २०१७ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै उनको पद खोसुवामा पर्‍याे र उनको यात्रा चीनतिर मोडियो।
जिम्मेवारी थियो, नेपाली भाषा सिकाउने। चीनमा जे कामका लागि गएको त्यसैमा मात्र अड्किएनन्। उनको ध्यान १३ औ शताब्दीमा नेपालबाट चीन पुगेका नेपाली कलाकार अरनिकोबारे अध्ययन, अनुसन्धानितर तानियो। चीनभरि छरिएका अरनिकोका सामग्री भेला पारे। अनि ‘कलाकार अरनिको’ नामक पुस्तक प्रकाशन गरे। अरनिलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति बनाउन पनि सत्यमोहन जोशीको ठूलो हात रहेको बताइन्छ। उनको चीन बसाइमा गरेको शाेधले अरनिको नेपालमा चिनिए, अरनिको राष्ट्रिय विभूति बने।
कामकै शिलशिलामा पूर्वी जिल्ला धनकुटा, तेह्रथुम आठराइदेखि सिंजासम्म पुगे। जहाँ गए त्यहाँको लोकसंस्कृति र चाडपर्वबारे गहिरोसँग अध्ययन गरे। उनलाई सबैभन्दा सन्तोष लागेको काम कर्णाली लोकसंस्कृतिबारे लेख्दा रहेछ। उनले पत्रकार सूर्य सुबेदीले लिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ‘गाउँले समाजसँग मिसिएर मैले एउटा टिम लिएर जसान एनथ्रोपोलोजीष्ट, भाषाविज्ञ, भुगोलविद्, लोकसंगीतकार र म आफैं वैज्ञानिक तरिकाले जुन कर्णाली लोकसंस्कृतिको अध्ययन गर्‍याैं र त्यसको नेतृत्व लिएँ। त्यस्तो बेजोड ग्रन्थ आजसम्म कसैले निकालेको छैन। पछि अरुले निकालान्। कर्णाली लोकसंस्कृति सबैभन्दा सन्तुष्ट दिने कृति हो।’
जोशीका बहुमूल्य कृति
जोशीले संस्कृतिमा आधारित ५०औं पुस्तक लेखे। हाम्रो लोकसंस्कृति, नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा, कर्णाली लोकसंस्कृति, नेपाली मूर्तिकलाका विकासक्रम, नेपाली धातुमूर्तिको विकास क्रम, पुरातत्व एक रोचक कथा, नेपाली चाडपर्व, न्युजील्याण्डमा पहिलो नेपाली, कलाकार अरनिको, दैलाको बत्ति, मुत्यु एक प्रश्न, फर्केर हेर्दा, जब घाम लाग्छ र बाग भैरवीलगायतका उनका कृतिले नेपालको भाषा र संस्कृती चिनायो।
नेपाली भाषा, कला, संस्कृतिको संरक्षण, संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासमा लागि उनले गरेको योगदानका कारण सुप्रबल गोर्खा दक्षिणबाहु विख्यात त्रिशक्ति पट्ट, आदिकवि भानुभक्त पुरस्कार, काठमाडौं विश्वविद्यालयले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि पाए।
नेपाल राष्ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग टक्सार महाशाखाबाट वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित चाँदीको सिक्का निकालेको छ।
जहाँ जे कामका लागि पुगे पनि खोजी र अनुसन्धानमै उनको ध्यान जान्थ्यो। खोजको प्यासले ‘हाम्रो लोक संस्कृति’सँगै ‘नेपाली राष्ट्रिय मुद्रा’ अनि कर्णाली लोकसंस्कृति लेखे र तीन पटक मदन पुरस्कार पाए।
एक सय १ वर्षमा प्रवेश गर्दा पनि उनको लेखन र खोजको यात्रा जारी छ। यात्रा जारी रहोस्।
ई-पासपोर्ट छपाइ ११ महिनादेखि प्रक्रियामै रुमलियो बुधबार, असार २४, २०७७